हाम्रा प्रत्येक मोड र बाटाहरु असुरक्षित छन् । छोरीहरुले हरेक यात्रा डराउदै डराउदै तय गर्नुपर्छ । कयौँ छोरीहरु गन्तव्यमा नपुग्दै शव बन्छन । दैनिक कम्तिमा ६ वटा बला’त्कारका घटनाहरु घटिरहेको छन् । केही मिडियामा आउछन् तर धेरैले अझैसम्म यस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि बाहिर ल्याउने साहस गर्दैनन् ।
छोरीहरु आफनै घरमा असुरक्षित छन्, यो भन्दा डरलाग्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ? बुवा, दाई पनि अपराध गर्छन, कयौँ श्रीमती श्रीमानबाट असुरक्षित रहेका घटना पनि नदेखिएका होइनन् । महिलाहरु अभिभावक बुबा, दाजु, भाइ वा श्रीमानको निणर्यमा, अधिनमा मात्रै चल्नुपर्ने तर सुरक्षा दिनेहरुबाट नै असुरक्षित भएपछि कहाँ जाने ? उनीहरूको जीवन अरू कसैबाट नियन्त्रित हुनै पर्ने यस्तो किन ?
नेपालमा बालिका मात्रै बला’त्कृत भइरहेका छैनन् वृद्धा पनि बला’त्कृत छन् । नेपालमा महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिले हुन्छ ? हामि अरुकै भरमा कहिले सम्म ? यावत प्रश्न दिनहुँ जन्मछन् । धेरै पहिला देखि महिलालाई बन्धक बनाईयो र अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दिमा हामी बन्धक जस्तै भएर बाचिरहेका छौँ ।
हाम्रो देशका मन्त्रिहरु बला’त्कार जस्तो अपराधलाई सामान्य रुपमा लिनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ “बला’त्कार हिजो पनी थियो, अहिले पनि छ र भोलि नि रहनेछ ।’ प्रतिनिधीत्व गर्नेहरुले यति ठुला समस्यालाई किन सामान्य रुपमा लिएको कसरी ? यस्ता सवालको व्यवास्ता गरेर साच्चै कस्ता सवालको वास्ता गरिन्छ ? र फेरि यस्तै चर्चा चलिरहेको बेला अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीना लिनुपर्ने प्रावधान राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्दै छ, विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
महिलाहरु बेचिन्छन, यो मुख्य समस्या हो यसलाई नियन्त्रण गर्न त केही गर्नै पर्छ । न कि सिफारीस र सहमती । यसरी बेचबिखन न्युनिकरणका नाममा सरकारले महिलालाई खुम्च्याउन खोजेको छ । यो त स्पस्टै छ त सरकार अझैँ महिलालाई बन्धक बनाउन खोज्छ अनि नेतृत्व गरिरहेका मान्छे पनि ।
सहमति र सिफारीस पछि स्वतन्त्र बन्नुपर्ने यस्ता कार्यविधि तयार हुन्छन् ? यस्तै निणर्य र गतिबिधिका कारण महिला झनै परनिर्भर हुन्छन् । नियन्त्रण गरेर सुरक्षित राख्ने बाहेक अरु त बिकल्प नै छैन । सरकारले कहिले बुझ्ने महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ, किन नबुझिएको महिलालाई पनि शिक्षित बनाउनु पर्छ ।
सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाको मुल भाव नै यहि हो छोरीहरु यक्लै हिड्नु हुँदैन । जहिले पनि परनिर्भर हुनुपर्ने, अरुको सुरक्षा त चाहिन्छ चाहिन्छ, अरु कसैले उनिहरुलाई सुरक्षा र साथ दिनै पर्छ । फेरी दलाल हरुले ४० वर्ष मुनिका महिलालाई मात्रै ठग्छन् ? ४० वर्ष माथिका सबै महिला परिपक्व छन् भन्ने के प्रमाण छ ? बरु अहिलेका महिला शिक्षित छन् । अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दिमा महिला बेचबिखनको गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले महिला र पुरुष बिच यो विभेदकारी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ, हुनु स्वाभाविकै पनि हो ।